Naya Post Nepal | रेखा थापा, सञ्चिता लुईटेल र ऋचा शर्मा पल शाह विरुद्ध बोलिन् हेर्नुहोस् कोकोले केके भने ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
रेखा थापा, सञ्चिता लुईटेल र ऋचा शर्मा पल शाह विरुद्ध बोलिन् हेर्नुहोस् कोकोले केके भने ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
नायक पल शाह र गायिका समिक्षा अधिकारी प्र’करण’को विषयमा रेखा थापाले मुख खोलेकी छिन्। कलाकारहरुले पलको पक्षमा धा’र णा रा’खिरहँदा रेखा थापाले भने समिक्षाको प’क्ष लिएकी छन्।
समिक्षाले प’लवि’रुद्ध प्रलोभनमा पारेर ब’ला’त्कार ग’रे’को आ’रोप लगाएकी छिन्। सोही विषयमा पल तनहुँ प्रहरीको हि’रासतमा छन्। यो विषय अदालतमा जाने देखिएको छ। यसबीचमा मानिसहरुले स मिक्षा, दुर्गेस थापाले पललाई फ’साउन खोजेको आ’रोप लागिरहेको छ।
यस्तोमा रेखा थापाले किशोरीलाई नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्याप्ने काम नगर्न आ’ग्रह गरेकी छिन्। उनी घुमाउरो पारामा भन्छिन्,‘२० बर्ष मुनिका छोरीहरु बा’लिका हुन्, बालिकाले कानुनत सबै प्र’कार का सुरक्षा र अ’भिभावक’त्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन्।
समाजको भूमिका उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने हो, को सँग लभ छ? कति पटक यौ’न सं’प’र्क भयो? यस्ता नैतीकताबादी कुराको कानु नलाई मतलब हुनु हुँदैन। समाजको आ’डम्बर त कुरा गरी सा’ध्य छैन। केटी मान्छे भने पछि दु’नियाँ भरी क’तै नभएका नैतीक माप दण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जाजनक रुपमा नेपालमा ब्याप्त छ।
’ नायक पल शाहको समर्थनमा अहिले मानिसहरु उर्लिन थालेका छन । पल शाह तनहुँ प्रहरीको हिरा,सतमा गएपछी तनहुँ जिप्रकामा पलका शुभचिन्तक र सन्चार्कर्मीको बाक्लो उपस्तिथी रहेको छ ।
यसै गरी नायक पल शाहले हलमा दर्शकसँग बसेर आफ्नो नयाँ चल चित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनले प” क्राउ पर्नुअघि जारी गरेको भिडियो सन्देशमा आफ्नो यो इ’च्छा पूरा गरिदिन प्रहरीलाई अ’नुरोध गरेका थिए ।
अभिनेता पल शाहले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि अहिले मि डियाकर्मी र फिल्मकर्मीको भिड तनहुँमा लागेको छ । पलका फ्यान हरु प्रहरी कार्यालय अ’गाडी जम्मा भएका छन् । एक जना १७ वर्ष की किशोरी गायीकाले इच्छा विपरित कर
णीको आरोप लगाउँदै उ’जुरी दिएपछि अभिनेता पल शाह प्र’हरी हि’रासतमा छन् । उनले सन्देशमा भनेका थिए, ‘हुन त कति सम्भव हुन्छ थाहा छैन । तर, यदि मिल्छ भने म दर्शकसँग ब’सेर यो हलमा यो फिल्म हेर्न चाहन्छु ।
प्रहरीले एकपटक यो मौ’का मिलाइदेवस ।’ ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ का निर्देशक सुदर्शन थापाले स्टाटस लेख्दै दर्शकसँग बसेर चलचित्र हेर्ने पलको इच्छा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
२०७८ फाल्गुन १८, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 1553 Views